​Somaliland: Ganacsade lagu xiray Hargaysa
HARGAYSA- Ciidamada booliska Somaliland, ayaa xabsiga dhigay ganacsadeCumar Caydiid Axmed oo ganacsiyo ku leh Somaliland Iyo Djibouti, waxana xadhigiisu salka ku hayaa muran ka aloosan Maalgashi uu ku sameeyey xaruntii murtida iyo madadaalada Hargeysa oo ay xukuumaddu ruqsad u siisay.
Wararka kala duwan ee kasoo baxaya xadhiga ganacsadahan ayaa sheegaya inuu diiday ogolaansho ay dad kale xukuumaddu u siisay wajahadda hore ee xarunta Tiyaatarka ee isaga la siiyey, halkaas oo hore u ahaan jirtey Parking, balse haatan dadka la siiyey doonayaan inay dhismayaal ganacsi ka dhistaan.
Ganacsade Cumar Caydiid, ayaa maanta ciidamada Boolisku ka qabteen aqalkiisa magaalada Hargeysa, mana jirin wax warqad soo qabasho ah oo ay maxkamadaha ka siteen, balse waxa ay sheegeen inay xadhigiisa amar ku qabaan, sida uu BBC-da u xaqiijiyey Wasiir-ku-xigeenkii hore ee qorshaynta Cabdikariin Axmed Mooge oo ay wada socdeen xilligii la xidhayey.
Cumar Caydiid, ayaa maalgalinayay xarunta Tiyaatarka, waxana kasocda dhisme dhawr dabaq ka kooban kaas weli qabyo ah, balse maalihii ugu dambeeyey waxa warbaahinta eedo culculus isu marinayey odayaal kasoo kala jeeday ganacsadaha la xiray iyo xubnaha kale ee dhismaha ku muransan yihiin.
Waxgaradka labada dhinacay ayaa xarigga ka hor ku baaqay in xukuumaddu arrinta faraha lasoo gasho.
Somaliland oo Ka Hadashey Muranka Tiyaatarka
Somaliland 07.02.2016. 14:49
HARGEYSA- Xukuumadda Somaliland, ayaa markii ugu horraysay ka hadashay muranka ka taagan xarunta tiyaatarka Hargeysa oo ay isku hayaan ganacsade Cumar Caydiid iyo xubno salaadiin ah oo madaxweynuhu mulkiyadiisa u hibeeyey.
Wasiirrada wasaaradaha Warfaafinta iyo ...